स्वर्ग हो त्यो ठाउँ, जँहाका आमा र छोरीमा फरक पाउन धेरै मुश्किल, ७० बर्षमा पनि गर्भधारण गर्न सक्छन् ! – Etajakhabar
स्वर्ग हो त्यो ठाउँ, जँहाका आमा र छोरीमा फरक पाउन धेरै मुश्किल, ७० बर्षमा पनि गर्भधारण गर्न सक्छन् !
हर कोही चाहन्छन् कि बुढो कहिल्यै हुन नपरोस् तर बढ्दो उमेरको असर त जसलाई पनि पर्छ । तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँका व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि बुढा देखिदैनन् । यहाँका महिलाहरू यती राम्रा हुन्छन् कि उनीहरूलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ कि मानौं स्वर्गका अप्सराहरू धर्तीमा आएका छन् । यो ठाउँ कुनै स्वर्ग भन्दा कम छैन ।
६० वर्षको उमेरमा पनि उनीहरू यस्ता लाग्छन् कि यिनीहरू बीस वर्षका केटीहरू हुन् । यहाँका आमा र छोरीमा फरक पाउन धेरै मुश्किल छ । यहाँको पानी नै यस्तो छ कि यहाँका महिलाहरू ७० वर्षको उमेरमा पनि गर्भधारण गर्न सक्छन् । यो उमेरमा आमा बन्दा पनि उनीहरूलाई कुनै दुःख हुँदैन ।
यो ठाउँ हो हुंजा घाटी, जुन पाक अघिकृत कश्मीरमा पर्छ । गिलगित– बाल्टिस्तानको पहाडमा स्थित हुंजा घाटीमा पाइन्छ । हुंजा भारत र पाकिस्तानको बीच नियन्त्रण रेखाको नजीक पर्छ । हुंजा घाटिका मानिसहरू कुनै बिमारी विना औसत ११० देखि लिएर १२० वर्ष सम्म बाँच्छन् ।
यो प्रजातिका व्यक्तिहरूको संख्या करिब ८७ हजार भन्दा बढी छन् । यिनको सुन्दरताको राज यिनीहको जीवन शैली हो । मुटुको रोग, मोटोपन, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर जस्ता रोगहरू दुनियाँभर फैलिएको छ । तर यी हुंजा प्रजातीका मानिसहरूले यी रोगका नाम सम्म पनि सुनेका छैनन् होला ।
यिनीहरूको स्वास्थ्य शरीरको राज यिनीहरूको खानपीन हो । यहाँका व्यक्तिहरू पहाडको स्वच्छ हावा र पानीमा आफ्नो जीवन व्यतीत गर्छन् । यिनीहरू काफी पैदल हिंड्छन् र केही महिना सम्म केवल Apricot मात्र खान्छन् । यसकोअलावा मेवा,जौ, कोदो, कुटु नै यिनीहरूको मुख्य आहार हो ।
यसमा फाइबर र प्रोटीनको साथ शरीरको लागि जरूरी मिनरल्स पनि हुन्छ । यिनीहरू ओखरको बढी प्रयोग गर्छन् । घाममा सुकाएको ओखरमा बी–१७ कम्पाउण्ड पनि पाइन्छ । जसले शरीरमा भएको एंटी– क्यान्सर एजेन्टको नष्ट गर्छ । यस जनजातिको बारेमा पहिलो पटक ड. रबर्ट मैककैरिसनले पब्लिकेशन अध्ययन स्टडीज इन डेफिशिएन्सी डिजीजमा लेखेका छन् ।,
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २५, २०७५ समय: १४:२२:३३
एउटा गाउँ जहाँ बालबालिका नै छैनन्, जन्मिनेबित्तिकै कि गुम्बाले लान्छ कि चर्चले
यस्तो अनौठो कुकुर जुन समुन्द्रमा लगातार २ सय २० किलोमिटर पौडी खेल्ने गर्छ
३ सन्तानकी आमा १५ दिनदेखि प्रेमीको साथमा फरार भइ फर्केपछी दिइयो यस्तो सजाय ,गाउँलेले बनाए १ घण्टा कुखुरा (भिडियो सहित)
नेपालकै यस्तो ठाँउ जहाँ युवतीलाई तानेर दाजुभाईको साझा बेहुली बनाउँछन्
७७ बर्षका भूपू भरतीय सैनीक जंगलमा यस्तो अवस्थामा, चारवटी श्रीमती, घरपुग्दा यस्तो देखियो (भिडियो)
हिन्दी फिल्मको गीतमा चिनियाँ युवती नाचेको भिडियो बन्यो भाइरल , हेर्नुहोस् यस्तो छ यो भिडियो
सँसारकै यस्तो अनौठो कुण्ड जहाँ अगाडी गएर ताली बजाए माथि आउँछ पानी , जुन कुण्डमा मागेको पुरा हुने विश्वास छ
किन लगाउनु हुँदैन च्यातिएका कपडा ? जान्नुहोस् रोचक तथ्य